Published in ဝန်ကြီးဌာနလှုပ်ရှုားမှုသတင်းများ July 08 2020	0
မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်၊ World Federation of Engineering Organizations(WFEO), Federation of Engineering Institutions of Asia and Pacific (FEIAP) တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသော အသင်းအဖွဲ့များ၊ ပညာရှင်များ၏ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို Online မှတဆင့် Webinar ဖြင့် ဟောပြောပို့ချခြင်းကို ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ခရေပင်လမ်း၊ အမှတ် ၅(က)၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီရုံး၌ ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားသို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော်၊ WFEO မှ Former President Dr. Marlene Kanga ဩစတြေးလျ ၊ FEIAP မှ Secretary General Ir.Dr. Tan Yean Chin မလေးရှား ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ချာလီသန်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့်၊ HPBC ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အောင်ကျော်မြတ်၊ နေပြည်တော်၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရွှေလေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ကြ ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော်က ယခုဆွေးနွေးတင်ပြမည့် ခေါင်းစဉ်နှင့် ပါတ်သက်၍ များစွာစိတ်ပါဝင်စားပါကြောင်း၊ အစိုးရပိုင် အဆောက်အအုံများနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဆောက်အအုံများအတွက် အရည်အသွေး မြင့်မားပြီး၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ၊ အများပြည်သူ စိတ်ချမ်းသာစွာနှင့်နေနိုင်ရေး အမြဲကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားရန် စိတ်အားထက်သန်ပါကြောင်း။
ယခု အပိုင်း (၂) ပိုင်းခွဲခြားပြီး ပြောချင်ပါကြောင်း၊ ပထမပိုင်းမှာ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍများတွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆောက်အဦများ ပြိုကျပျက်စီးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခြင်းဆိုသည့်သတင်းများမှာ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ပိုမို၍ပင် များပြားလာ သည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တစ်ခုတည်းသော ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းမှာ အခြေခံ စံနှုန်းများကို အဖက်ဖက်မှ မြှင့်တင်ရန် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲသည့် စနစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ၏ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ဖြစ်သည့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း၊ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း စသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်ရ မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အရည်အသွေးမီသည့် ဒီဇိုင်းများဖြစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်း နှင့် အသေးစိတ်ညွှန်းဆိုချက်တို့ကို တိကျစွာပေးပြီး လုပ်ဆောင်ကြရမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ FIDIC မှ လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာ၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မျှတသည့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ စီမံကိန်း ကြီးကြပ် ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုလည်း တိတိကျကျဖော်ပြပြီး လိုက်နာကြရမည် ဖြစ်ပါ ကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီအနေဖြင့် ပညာရှင်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာ ငယ်များ၏ အရည်အသွေးကို အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသလို အမျိုးသား ကျွမ်းကျင်မှုစံနှုန်းသတ်မှတ်ရေး၊ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းကလည်း အားစိုက်၍၊ လုပ်သား အင်အားစု၏အရည်အသွေး မြှင့်တင်စိစစ်နေသည့်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ၏ လိုအပ် ချက်များကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးရာရောက်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဒုတိယပိုင်းအနေဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့အနေနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ရေး ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍက နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကကျသည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သလို နိုင်ငံတော်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၅၀ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုသည့်အတွက် နိုင်ငံတော်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များကို ထိရောက်ရန်၊ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးကဏ္ဍ စည်းချက်ညီစွာ တိုးတက်ကောင်းမွန် လာစေရန် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ထိရောက်အကောင်အထည်ဖော် နိုင်မှုအပေါ်မှာ များစွာမူတည်ပါကြောင်း။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ကို မဖြစ်မနေ ဖွဲ့စည်း၍ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သေချာစွာ ထိန်းကျောင်း၍ တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့် လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိနေရန် ဆောင်ရွက်ရ မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဝယ်ယူရေးဥပဒေ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက် ပြည်သူလူထု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားမှုအတွက် ရည်ရွယ်၍ ပြုစုထားပြီး ဈေးနှုန်း သက်သာ၍ ထိရောက်မြန်ဆန်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများကိုလည်း အကျိုးတူ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါကြောင်း။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် Building Construction Industry Development Law (BCID) တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရန် အဆင့်ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ UN Habitat၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ အသင်းတို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား အဆောက်အအုံ ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များအား အခြားဝန်ကြီး ဌာနများ၏ ပူးပေါင်းထောက်ခံမှုဖြင့် ပြုစုခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ဒိုမီနီယံဥပဒေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေနှင့် မြို့ပြမူဝါဒကိုပြဋ္ဌာန်းရန် အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ အဆင့်အတန်းများ တိုးတက်ရေးအတွက် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော ကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်း များအားလုံးကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် ပန်ကြားလိုပါကြောင်း၊ အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အများပြည်သူ သုံး အဆောက်အအုံများ အားလုံးကို လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ကြမည်ဟု ယုံကြည် ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ World Federation of Engineering Organizations (WFEO) မှ Former President Dr.Marlene Kanga က ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ The Latest Changes in Australia ခေါင်းစဉ်နှင့် အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် Federation of Engineering Institutions of Asia and Pacific (FEIAP) မှ Secretary General Ir. Dr. Tan Yean Chin က Responsibility & Accountability of Stakeholders in Construction Industry in Malaysia ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အသေးစိတ် ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ချာလီသန်းနှင့် တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူးတို့က Moderator အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့်က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အစည်းများ ခေါင်းစဉ် နှင့် စာတမ်း၊ အထပ်မြင့်နှင့် အများပြည်သူသုံး အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့ (HPBC) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အောင်ကျော်မြတ် က Present Inspection System for High rise and Public Building Projects ခေါင်းစဉ်နှင့် စာတမ်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီဝင် ဦးမျိုးမြင့်က Challenges ahead for Myanmar Construction Industry ခေါင်းစဉ်နှင့် စာတမ်းများတို့ကို အသီးသီး ဖတ်ကြားဆွေးနွေးခဲ့ပြီး Webinar တွင် ပါဝင်တက်ရောက်သူများက အပြန်အလှန်မေးခွန်းများ အဖြေများဖြင့် ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် COVID-19 နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာကျော်လင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမား လက်သမားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးဌေးလွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းတို့နှင့် ယနေ့နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်တွေ့ဆုံ၍ လက်တွေ့အခြေအနေများကို အပြန်အလှန် ဆွေး နွေးသည်။
ရှေးဦးစွာ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာ စကားပြောကြားရာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောမည့်နေ့တွင် အားလုံး သိရှိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ဖားကန့်ကိစ္စအား ကြားကြမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဖားကန့် အကြောင်းနှင့် တစ်ဆက်တည်းပြောလိုသည်မှာ မိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လည်း ဝမ်းနည်းစရာကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နောက်တစ်ခုမှာ မိမိတို့အခြေခံပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုနှင့် ပတ်သက်နေသည့် ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဖားကန့်တွင် ကျောက်တူးခြင်းမှာ မိမိတို့ ပြည်သူ အများစုသည် ဝမ်းစာအတွက်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုကွယ်လွန်သွားသည့် သူများထဲတွင် တရားမဝင်တူးနေသူများ အများစုပါဝင်ပါကြောင်း။
ယင်းကဲ့သို့ တရားမဝင် ကျောက်တူးနေခြင်းမှာ တရားဝင်အလုပ်ရှာရန် ခက်ခဲနေသည့် အခြေအနေတွင် မိမိတို့နိုင်ငံသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိနေသည်ကို လက်ခံရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ပြည်သူများ တရားဝင်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးကို အလေးထား ပါကြောင်း၊ ယင်းသို့ တရားဝင်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး အလေးထားသည့် အထဲတွင် ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍသည် များစွာအရေးကြီးပါကြောင်း၊ ယင်းသို့ပြောကြားရခြင်းမှာ အထူးသဖြင့် ကိုဗစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍသည် အထူးပါဝင်သည်ကို ပြောကြားလို ပါကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးသည် ရပ်ထား၍လည်း မရပါကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏အခြေခံ အဆောက်အအုံ များနှင့်လည်း ဆက်နွယ်နေပါကြောင်း။
ထို့ပြင် ဆောက်လုပ်ရေးဘက်တွင် ကျန်းမာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ကိုက်ညီစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပါကြောင်း၊ တချို့လုပ်ငန်းများတွင် ခွာ၍လုပ်ကိုင်ရန် မလွယ်ကူပါကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို တိတိကျကျလိုက်နာရန် တချို့လုပ်ငန်းများတွင် မလွယ်ကူပါကြောင်း၊ သို့သော် ဆောက်လုပ်ရေးသည် ယင်းအပိုင်းတွင် ကိုင်တွယ်၍ အထိရောက်ဆုံး ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည့် အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကို စောစီးစွာ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဆောက်လုပ်ရေးသည် အမြဲလိုအပ်နေပါကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးသည် အမျိုးမျိုး ရှိပါကြောင်း၊ အခြေခံအားဖြင့် လမ်း၊ တံတားသည် ပြည်သူများအတွက် များစွာအရေးကြီး ပါကြောင်း၊ အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ခြင်းသည် ပြည်သူများအတွက် အလုပ်ရနိုင်ပြီး တက်လမ်းလည်း ပွင့်စေသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်စေလိုပါကြောင်း၊ ယနေ့ ဆွေးနွေးရန်လာသူများ တွင် ဦးကျော်လင်း သည် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဦးဌေးလွင် သည် ဆောက်လုပ်ရေးတွင် ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဦးရှိန်ဝင်းသည် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဘက်မှ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အလုပ်သမားများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ စီမံခန့်ခွဲပေးရပါကြောင်း။
အစိုးရအနေဖြင့် ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားနေသည့်အချိန်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ မရပ်တန့် သွားစေရန်၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လည်ပတ်ရင်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ တွင် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးမထိခိုက်စေရန်နှင့် ကိုဗစ်ရောဂါသည် ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားများကြားတွင် မပြန့်ပွားစေရန်အတွက် သတိထားရပါကြောင်း၊ ကိုဗစ် အလွန်ကာလကိုလည်း ကြည့်ရပါကြောင်း၊ ယင်းမှာအမြဲတမ်း သတိပြုရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်ကာလကြောင့် နိုင်ငံ၏စက်ယန္တရားကြီးသည် ရပ်တန့်သွားမည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ဆက်လက် လည်ပတ်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆက်လက်လည်ပတ်ရာတွင် တိုးတက်သည့်ဘက်ကို လည်စေလို ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာကျော်လင်းက ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍကြီး တစ်ရပ်လုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍကြီး တစ်ရပ်လုံးကို မှီခိုနေသည့် လူဦးရေမှာ ၂ဝ၁၈ စာရင်းအရ ၁ ဒသမ ၃၇ သန်း ရှိပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အဓိကထိခိုက်သူများသည် လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ သံချည် သံကွေး၊ အထွေထွေလုပ်သား စသည့် အောက်ခြေလုပ်သားအများစု ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၎င်းလုပ်သားအားလုံးနီးပါးသည် တန်စား၊ ပေစား၊ ကျင်းစားနှုန်းဖြင့် ပုတ်ပြတ်လုပ်သားများ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကိုဗစ်-၁၉ သက်ရောက်မှုသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားချိန်တွင် အခြေခံလူတန်းစားများ၏ စားဝတ်နေရေးကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ပါကြောင်း။
ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရဘတ်ဂျက်ဖြင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဟူ၍ ၂ မျိုးရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရဘတ်ဂျက်ဖြင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတော်၏ ပြည်တွင်းသုံးငွေဖြင့် ငွေလုံးငွေရင်း ကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံတကာချေးငွေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဟူ၍ ၂ မျိုး ရှိပါကြောင်း၊ ပြည်တွင်းသုံးဘက်ဂျက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း တန်ဖိုးသည် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများမှ နှစ်စဉ် ငွေကျပ် ဘီလီယံ ၅ဝဝဝ ကျော်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းမှာ နှစ်စဉ်ငွေကျပ် ဘီလီယံ ၂ဝဝဝ ကျော်ရှိပါ ကြောင်း။
ပြည်တွင်းသုံးဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ စတင်သည့် မတ်လကုန်ပိုင်းမှစ၍ ဧပြီလတစ်လလုံး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ အားလုံးနီးပါး ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မေလပထမပတ်မှစ၍ ပြည်တွင်းသုံးငွေဖြင့် ဘတ်ဂျက်ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါး ပြန်လည်စတင်နေပြီး ယခုအခါ နိုင်ငံတော်၏ ပြည်တွင်းသုံးငွေနှင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါး ပုံမှန်အခြေအနေအတိုင်း ပြန်လည် ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း။
တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအများစုသည် ပုံမှန်အတိုင်း စက်တင်ဘာလကုန်တွင် ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းအနည်းစုသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အချိန် ကာလနောက်ကျခြင်းနှင့် လက်ရှိမိုးရာသီ ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ လကို ထပ်တိုးဆောင်ရွက်ခွင့် တောင်းခံထားသောကြောင့် အချို့ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းပြီးစီးချိန်တွင် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စစ်ဆေး မပေးနိုင်၍ ငွေထုတ်ပေးမှုနောက်ကျနေခြင်းများကြောင့် ကုမ္ပဏီငယ်များ၏ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပါကြောင်း။
နိုင်ငံတကာချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ထိခိုက်မှု ပိုမိုရှိပါကြောင်း၊ ပြည်ပမှ စက်ယာဉ်ယန္တရားနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှု နောက်ကျခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင်များလာရောက်ရန် အခက်အခဲများကြောင့် အဓိက ထိခိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာချေးငွေအနေဖြင့် ADB, World Bank, JICA တို့မှ ထပ်မံ ကမ်းလှမ်းထားမှုများရှိပါကြောင်း၊ ကက်ဘိနက်နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ သဘောတူ ခွင့်ပြုပါက အဆိုပါ Project များ ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက် တည်ဆောက်ခြင်း၊ သာသနာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Developer များဟူ၍ ၃ ပိုင်း ရှိပါကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက် တည်ဆောက်သူများနှင့်သာသနာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦတည်ဆောက်သူများသည် ကိုဗစ်-၁၉ စတင်သည့် မတ်လ၊ ဧပြီလများတွင် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားသော်လည်း မေလမှ စတင်၍ ပြန်လည် ဆောင်ရွက်နေကြပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့သော် ပုံမှန်အခြေအနေအောက် ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းနေပါကြောင်း၊ အဓိကအထိနာသည့် အပိုင်းမှာ Developer များက ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသည့် အပိုင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အိမ်ရာအရောင်းအဝယ်သည် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်အေးစက်နေပြီး ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ရပ်ဆိုင်းသလိုဖြစ်သွား၍ ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် Developer များအတွက် သက်ရောက်မှု ကြီးမားခဲ့ပါကြောင်း။
ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ချက်များအနေဖြင့် ကိုဗစ်စတင်သည့် မတ်လ ကုန်ပိုင်းတွင် လုပ်သားများအား ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ်အသိပညာပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်ချိန် အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်း၊ Social Distancing စသည့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များပေးခြင်း၊ Mask များ၊ သာမိုမီတာများ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ လက်ဆေး ကန်များ တည်ဆောက်စေခြင်း၊ အများသုံးရေအိုးစင်များ ဖြုတ်သိမ်းထားခြင်း၊ စားသောက်နေရာ များကို ၆ ပေစီခြား၍ ပြန်လည်စီစဉ်ခြင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အခြေခံစားသောက်ကုန်များ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ ဆေးရုံများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများသို့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကုသရေးအတွက် အလှူငွေများ၊ Mask၊ သာမိုမီတာ၊ PPE ဝတ်စုံများ လှူဒါန်းခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များတွင် Facilities Quarantine ဧရိယာအသုံးပြုနိုင်ရန် ဝန်ကြီးဌာနများမှ တိုက်ခန်း ၂၃၆၈ ခန်း အား ညှိနှိုင်းအသုံးပြုခွင့် ပေးထားပါကြောင်း။
အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဗိသုကာများကဏ္ဍတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် Stay Home ကာလအတွင်း လစာငွေ လျှော့ယူရမှုမျိုးရှိသော်လည်း ယခုအခါ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သွင်းအားစု လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် သံချောင်း၊ ဘိလပ်မြေ၊ အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက် Demand များ ပုံမှန်၏ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျနေသော်လည်း ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများမှာ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလခန့်တွင် ပုံမှန်အခြေအနေ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းပါကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်မှုအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသည် အလုပ်အကိုင် သင်တန်းပေးရန် မလိုအပ်ပါကြောင်း၊ လက်သမားအကူ၊ သံချည်သံကွေးအကူ၊ ပန်းရံအကူနှင့် အထွေထွေလုပ်သား စသည့်ဖြင့် ချက်ချင်းဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးရန် အလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ PPP အစီအစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ Project များဖော်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးလာနိုင်ပါကြောင်း။
CERP အပေါ် ဆောင်ရွက်ခြင်းအနေဖြင့် တံတားဂိတ် ၆၈ ဂိတ်နှင့် လမ်းဂိတ် ၂၄ ဂိတ် တို့အား ဇွန်လ ၁ ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ၃ဝ ရက်အထိ လမ်းအသုံးပြုခ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေး အစီအစဉ်အရ PPP လုပ်ငန်းများတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းတံတား စီမံကိန်း ၄ ခုအား EOI ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း။
အထွေထွေတင်ပြချက် အနေဖြင့် အိမ်ရာဝယ်လိုအား တက်လာရန်အတွက် ဘဏ်များမှ အရစ်ကျချေးငွေ စံနှုန်းများများ ဖော်ဆောင်ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့အငှား အိမ်ရာ စီမံကိန်းများကို နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ဖော်ဆောင်ပေးရန် တင်ပြလိုပါကြောင်း၊ တစ်နှစ်လျှင် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက် ဘီလီယံ ၂၅ဝ ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါက စတုရန်းပေ ၆၅ဝ အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါ အငှားတိုက်ခန်း ၁ဝဝဝဝ တည်ဆောက်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးသည်။
ယင်းနောက် ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမား လက်သမားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးဌေးလွင်က မိမိအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လက်သမားဆရာ လုပ်ပါကြောင်း၊ လုပ်သက် နှစ်(၂ဝ)ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းတွင် (၆)ထပ်တိုက်များ ဆောက်လုပ်နေသည့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုက်ထဲတွင် အလုပ်လုပ်နေပါကြောင်း၊ ယင်းဆိုက်ထဲတွင် မိမိနှင့်အတူ သံချီ၊ သံကွေး၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား (၂ဝဝ)ခန့် အလုပ်ဆင်းပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် တစ်ရက်လျှင် လုပ်အားခ (၁၁ဝဝဝ) ရပါကြောင်း၊ လုပ်သားအများစုမှာ တစ်ရက် (၉ဝဝဝ) မှ (၁၅ဝဝဝ) ခန့်အထိ ရကြပါကြောင်း။
ကိုဗစ်ဖြစ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်များ ဧပြီ လ မှ မေလ အထိ လုံးဝရပ်ဆိုင်းထားသည့် အချိန်တွင် မိမိတို့စားသောက်ရေးအတွက် မိမိတို့ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဆန်၊ ဆီ၊ ကြက်ဥများ ပေးပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်ကပေးသည့် ဆန်၊ ဆီများလည်း ရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စားသောက်ရေး အဆင်ပြေခဲ့ပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများ ပြန်စသည့်အခါ ဆိုက်ထဲမဝင်မီတွင် ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းရ ပါကြောင်း၊ ကိုယ်အပူချိန်ပုံမှန်ဆိုပါက ဆိုက်ထဲ ဝင်ခွင့်ရရှိပါကြောင်း၊ ဝင်ခွင့်ရသည်နှင့် လက်ဆေး၍ နှာခေါင်းစည်းတပ်ရပါကြောင်း၊ အလုပ်ခွင်တွင် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် (၆) ပေလောက်စီခြား ပြီး အလုပ်လုပ်ကြရပါကြောင်း၊ ထမင်းစားချိန်တွင်လည်း (၆)ပေခွာပြီး စားကြရပါကြောင်း၊ ကိုဗစ် မဖြစ်ရန်အတွက် ကြီးကြပ်သည့် တာဝန်ခံ အရာရှိနှင့် အဖွဲ့က စစ်ဆေးကြပ်မတ်ကြပါကြောင်း။
အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်တွင် အလုပ်ရှင်က ဒိုင်နာကားများ စီစဉ်ပေးပါကြောင်း၊ စက်ဘီးနှင့် လာသည့်သူများလည်းရှိပါကြောင်း၊ တစ်ချို့မှာ ဘတ်စကားဖြင့် လာကြပါကြောင်း၊ ယခု အလုပ် ရှိနေသည့်အတွက် မိမိတို့ စားသောက်ရေး အဆင်ပြေပါကြောင်း၊ အလုပ်(၃) ရက်ခန့် မဆင်းရပါက မိမိတို့ အများစုသည် စားစရာမရှိတော့ပါကြောင်း၊ ယင်းအခါတွင် မိမိတို့နီးစပ်ရာတွင် ပိုက်ဆံချေးပြီး သုံးရပါကြောင်း၊ ကလေးများကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် ပိုက်ဆံချေးပြီး သုံးရခြင်းများပါကြောင်း၊ ယခုအခြေအနေတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အများစုသည် ရပ်ဆိုင်းထားသည့်အတွက် အလုပ်မရှိသည့် လုပ်သားများ တော်တော်လေး အခက်အခဲများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါ ကြောင်း။
မိမိတို့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများအတွက် တင်ပြလိုသည်မှာ မိမိတို့လုပ်သားများသည် အလုပ်(၃) ရက်ခန့် မလုပ်ရပါက စားစရာ အခက်အခဲဖြစ်ကြသည့်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုက်များ များလာစေရန် စီစဉ်ပေးရန်နှင့် မိမိတို့ အလုပ်မရှိချိန်နှင့် ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် ငွေချေး၍ ရအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားများသည် နယ်မှရန်ကုန်သို့လာပြီး အလုပ်လုပ်ကြသူများဖြစ်သည့်အတွက် ရန်ကုန်တွင် နေစရာအိမ်မရှိကြ ပါကြောင်း၊ အလုပ်ရှင်များ စီစဉ်ပေးသည့် နေရာများတွင် နေရသည့်သူများက အဆင်ပြေပြီး အချို့အနေဖြင့် ကျူးကျော်တဲများတွင် ပြန်ငှားနေကြပါကြောင်း၊ မိမိတို့ လုပ်သားများ စုစည်းပြီး နေ၍ရသည့် မြို့ပြင်များတွင် မြေဝိုင်းများ စီစဉ်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဘာသာ တဲထိုးပြီး နေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းက နိုင်ငံတော်က ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် CERP COVID-19 စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သက်သာခွင့်အစီအမံ Guide Line အတိုင်း နိုင်ငံတော်နှင့်အတူ MCEF အသင်းချုပ်အနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသော ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များ လိုက်နာရသည့် COVID-19 ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှု ကော်မတီမှညွှန်ကြားချက်များ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါကြောင်း၊ MCEF အသင်းချုပ်နှင့်တကွ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ရှိသည့် အသင်းခွဲများမှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးသို့ အကြောင်းကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ၊ ဆပ်ပြာ၊ လက်ဆေးကန်၊ တစ်ရူးပါ အဝတ် Mask ၊ Hand Spray၊ လက်သုတ်တစ်ရူး၊ လက်အိတ်၊ အမှိုက်ပုံး၊ ရေဆိုးမြောင်း၊ မိလ္လာစနစ်၊ ပညာပေးပိုစတာများကို စီမံပြုလုပ်စေခဲ့ပါကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းတွင် COVID-19 ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ခံတစ်ဦးခန့်အပ်စေပါကြောင်း။
ပညာပေးပိုစတာများကပ်ခြင်း၊ လက်ဆေးကန် အလုံအလောက်ထားပေးခြင်း၊ စနစ်တကျ လက်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ဆပ်ပြာ၊ ရေ၊ တစ်ရှူးအလုံအလောက် ထောက်ပံ့ပေးရန်တို့ ကိုလည်း လမ်းညွှန်ထားရှိပါကြောင်း၊ စားဖိုဆောင်ဝန်ထမ်းများ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စများအနေဖြင့် ဖျားနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ အသက်ရှုရခက်၊ အင်အားကုန်ခန်းခြင်း စသည်တို့ကို အထူးသတိပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါကြောင်း၊ လူစုလူဝေးများ ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် ပိုစတာလက်ကမ်းစာစောင်များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်၌ ဖြန့်ချိရန်၊ အသံဖိုင်များနားထောင်နိုင်ရန် ပြုလုပ်စေလျက်ရှိပါကြောင်း၊ အလုပ်သမားများအကြား ကောလာဟလ သတင်းအမှားများ ပျံ့နှံ့မှု မရှိစေရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ မတ်လ ၂၃ရက် COVID-19 စတင်ချိန်ကာလတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ ဆေးဝါးကုသရန် အတွက် ဝေဘာဂီ၊ ကူးစက်ဆေးရုံတွင် လူနာလက်ခံရန် အရေအတွက် ၂ဝဝသာ ရှိပါကြောင်း၊ ပြည်သူများကုသရန်အတွက် အခက်ခဲမရှိစေရန် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ ဦးဆောင်ပြီး လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဖောင်ကြီးဝန်ထမ်း လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကို Covid-19 Medical Center (အောက်မြန်မာပြည်) ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ရာ၌ ICU (၄)ဆောင်၊ X-ray, CT Scan (၁)ဆောင် အပါအဝင် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းအဆောင်၊ လူနာဆောင်စုစု ပေါင်း(၁၄)ဆောင်နှင့် ခြံစည်းရိုးပေ (၁ဝဝဝဝ) ခန့်၊ လမ်း၊ Infrastructure အားလုံးကို ဧပြီ ၂ ရက်မှ မေလ ၁ ရက်အပြီး တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ကုန်ကျစရိတ်ငွေကျပ်သိန်း(၁ဝဝဝဝ) ကိုလည်း အပြီးလှူဒါန်းခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို အပ်နှံပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ COVID-19 အောက်မြန်မာပြည် ခံတပ်ကို MCEF အသင်းချုပ်အနေဖြင့် အမျိုးသားတာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် အခက်အခဲကြားက အချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း။
Covid ကာလ နေပြည်တော်တွင် ဆောက်လုပ်မည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁၈၉)လုံးကို MCEF အသင်းချုပ်နှင့် MLCA အသင်းချုပ်တို့သည် ဧပြီလကစတင် ဆောက်လုပ်ပြီး စက်တင် ဘာလတွင် ပထမအသုတ်ပြီးစီးအောင် အကောင်ထည်ဖော် ဆောက်လုပ်နေပါ ကြောင်း၊ COVID-19 ကာလအတွင်း ပြည်ပက ပြန်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံသားများထဲမှ ဇွန်လ၂၂ရက်အထိ ဆောက်လုပ် ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်သားစာရင်းကို ပြည်ထောင်စုအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန မှရရှိပြီး အမျိုးသား ၄၁၁၃ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၉၇ဝ ၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့် CV From တောင်းခံပြီး ပြည်နယ်တိုင်းအသီးသီးလုပ်ငန်းရှင်များက အလုပ်အကိုင်များပေးနိုင်ရန် လုပ်ဆောင် နေပါကြောင်း၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ Skill Labour၊ အထွေထွေလုပ်သားခွဲခြားစာရင်း ကောက်ယူမည် ဖြစ်ပြီး အထွေထွေလုပ်သားထဲမှ Skill Labour ဖြစ်လိုသူများကို သင်တန်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မကြာမီ နေပြည်တော် MCEF အသင်းချုပ်ပိုင် မြေ(၅)ဧက ပေါ်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံ ဟော့ကိုင်းရိုးအစိုးရအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ဂျပန်နည်းပညာ ဆောက်လုပ်ရေးသင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
COVID-19 ကာလတွင် လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါး ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပါကြောင်း၊ ကုန်သွယ်မှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိခိုက်သွားသည့်လုပ်ငန်းများ(၆)လမှ (၃)နှစ် အထိအချိန်ယူပြီး လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် အရေးအကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး အမြန်ဆုံးနှင့် အများဆုံးဖန်တီးနိုင်သည်ကို တွေ့ရ ပါကြောင်း။
COVID-19 ကာလတွင် ပထမဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် ပြည်သူလူထု၏ အခြေခံလိုအပ်ချက် လုပ်ငန်း (Infrastructure) လုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ရပ်ကွက်၊ ရပ်ရွာထဲအထိ အမြန်ဆုံးဦးစားပေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ COVID-19 ကာလ အတွင်း ပြည်သူလူထု၏အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပြီး ရပ်ရွာနေ ပြည်သူများအထိ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးပွားစေနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရေးများစွာ ဖန်တီးပေးသည့်အတွက် စက်မူဇုန် စီမံကိန်းများကို ဖော်ထုတ်အားပေးခြင်းဖြင့် စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားများအတွက်လည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး ထပ်မံ ရရှိမည်ဖြစ် ပါကြောင်း။
COVID-19 ကာလတွင် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက် မသုံးဘဲ လက်ရှိဝန်ထမ်းများ Down Payment အနည်းဆုံးနှင့် လစဉ်အရစ်ကျသက်သာသော ငွေပေးချေမှုနှင့်အတူ ၎င်းဝန်ထမ်းများပင်စင်ယူ သည့်အခါ တိုက်ခန်းအလွယ်တကူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေးအတွက် MCEF အသင်းချုပ်အနေဖြင့် Pilot Project တစ်ခုကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
COVID-19 ကာလတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၏ ဘတ်ဂျက်တချို့ လျှော့ချမူများ ပြုလုပ်ခဲ့ ရပါကြောင်း၊ နောက်လာမည့်ဘတ်ဂျက်နှစ်တွင် လျှော့ချထားသည့် အသုံးစရိတ်များ ပြန်ဖြည့်တင်း ပေးရန်နှင့် တင်ဒါအောင်ကန်ထရိုက်တာများကိုသာ လုပ်ငန်းပြန်ချပေးရန် တင်ပြအပ်ပါကြောင်း၊ ဒုတိယဝန်ကြီး တင်ပြထားသည့်အတိုင်း ပြီးစီးရမည့် သက်တမ်းကာလ (၃)လ တိုးပေးရန် တင်ပြ အပ်ပါကြောင်း။
COVID-19 ကာလ တင်ဒါလုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှတစ်ပတ်တစ်ကြိမ် MCEF ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး တင်ဒါ ငွေကြေးထုတ်ယူမူ အခက်အခဲ၊ အခြားလုပ်ငန်းအခက်အခဲများကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် တင်ဒါ လုပ်ငန်းများ အမြန်ပြီးစီး အောင်မြင်လာမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
နှစ်အလိုက် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်များ ပြည့်မီအောင်ချပေးသော်လည်း တင်ဒါ မအောင်မြင်ဘဲ နှစ်ကုန်လျှင် နိုင်ငံတော်သို့ ပြန်လည်အပ်နှံရသည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း၊ အသင်းချုပ်အနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးမှ တင်ဒါလုပ်ငန်းရှင် ကန်ထရိုက်များကို ကော်မတီ တစ်ရပ် ဖွဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ၁/၂ဝ၁၇ တင်ဒါစည်းကမ်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ပြင်ဆင် ရေးဆွဲခဲ့သည်မှာ မကြာမီပြီးစီးတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
နိုင်ငံတော်၏ NECC ကလည်း တင်ဒါစည်းကမ်းလိုအပ်ချက်များ ပြင်ဆင်နေသည်ဟု သိရပါ ကြောင်း၊ အောက်ခြေမြေပြင်တွင် အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နေသည့် တင်ဒါလုပ်ငန်းရှင် ကန်ထရိုက်များ ပြင်ဆင်ထားသည့် တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် NECC က ပြင်ဆင်သည့် တင်ဒါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတို့ ပေါင်းစပ်ပြီးမှသာ တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်ကို ထုတ်ပြန်ပေးရန် တင်ပြအပ်ပါကြောင်း။
COVID-19 ကာလတွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ကျပြီး တည်ဆောက်ဆဲ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း (၂)မျိုး ရှိပါကြောင်း၊ (၁) ပုဂ္ဂလိကနှင့်နိုင်ငံတော်အကျိုးတူ ပြုလုပ်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ BOT,PPP စီမံကိန်းများနှင့် (၂)ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေပေါ်တွင် Developer များဆောက်လုပ်သည့် Apartment ၊ Condominium ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသည် Covid-19 ကာလ အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါကြောင်း၊ တည်ဆောက်ဆဲလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းမသွားရန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရပ်တန့်မသွားစေရန် နိုင်ငံတကာ တွင် နိုင်ငံတော်ကသာ ဦးဆောင်၍ Project တန်ဖိုး၏ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာသည့် အတိုးနှုန်းနှင့် နှစ်လတ်ချေးငွေများ ချပေးခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းများအားလုံးကို တပြိုင်တည်း ငွေချေးရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်က ငွေလုံးငွေရင်းနှင့် စိုက်ထုတ်ချေးရန် ခက်ခဲနေသည်ကို သိရှိရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံခြားမှ သက်သာသော အတိုးနှုန်းဖြင့် ရရှိခဲ့ပါက ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များက တစ်ဆင့် တာဝန်ယူပြီး Project တန်ဖိုး၏အနည်းဆုံး ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိချေးငွေရရှိလျှင် အဆင်ပြေနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆောက်လုပ်ပြီး၊ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအရေအတွက် အခန်းပေါင်း (၁၅ဝဝဝ)ခန့် ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရောင်းချနိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း အိမ်ခန်း ၆ဝဝဝ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တစ်ခန်းလျှင် ငွေကျပ်သိန်း (၂၅ဝဝ) ပျမ်းမျှနှင့် ရောင်းချနိုင်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ နိုင်ငံခြားငွေရရှိမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး လည်ပတ်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာတွင် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း အများအပြား ရောင်းချနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရကပါ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါကြောင်း၊ ဥပမာ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်လျှော့ပေါ့ပေးခြင်း၊ သက်သာသော Mortgage Loan ပေးခြင်း၊ 10 Years Multi-Visa ထုတ်ပေးခြင်း၊ Second Home ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေ အများအပြား တိုးတက်ရရှိနေကြပါကြောင်း။
နိုင်ငံသားများအတွက် COVID-19 ကာလတွင် နိုင်ငံတော်က ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပေးခြင်းထက် လိုအပ်နေသည့် ဥပဒေများ ဖြေလျှော့ပေးခြင်းက ဝယ်သူများ အတွက်ပို၍ ထိရောက်မှုရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံသားများအတွက် တိုက်ခန်း ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းအိမ်ခန်း (၉ဝဝဝ) အတွက် ရောင်းရမည်ဆိုပါက ငွေကျပ် ၂၂၅ ဘီလီယံ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းငွေများသည် နိုင်ငံတွင်းစီးပွားရေးလည်ပတ်မှုတွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထား လျှော့ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝဘဏ္ဍာရေး နှစ်တစ်နှစ် စမ်းသပ်လျော့ပေါ့ပေးခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ ဝင်ငွေခွန်လျှော့ပေါ့ကောက်ခံခြင်းကြောင့် အခွန်ငွေများ ထူးခြားစွာ တိုးတက်ရရှိရုံမျှမက အခွန်ထမ်းဦးရေများစွာ တိုးလာသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခင်နှစ် ကာလတူ ပထမ(၃)လပတ်တွင် အခွန်ထမ်းဦးရေ တိုးတက်မှုရာခိုင်နှုန်း၂၅၈ ဒသမ ၃၁၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကောက်ခံရရှိသည့် ဝင်ငွေပေါင်းသန်း ၃၇ဝဝဝ တိုးတက်မှုရာခိုင်နှုန်း ၆၆ ဒသမ ၄၅၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ရရှိငွေ ၉၆၂၉ သန်း တိုးတက်မှု ရာခိုင်နှုန်း ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီး အခွန်ငွေ တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း၊ နောက်ထပ် ယခင်နှစ်ကာလတူ ဒုတိယ (၃)လပတ် တွင်လည်း ဝင်ငွေခွန်နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်များ တိုးတက်ရရှိသည်ကို စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရှိခဲ့ရပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်ကာလတွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါကြောင်း၊ မကြာမီ လာမည့် စက်တင်ဘာ (၃ဝ)တွင် တစ်နှစ်သက်တမ်းကုန်တော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် နောက်ထပ် တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးပေးရန်အတွက် မေတ္တာရပ်ခံတင်ပြအပ်ပါကြောင်း၊ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဝင်ငွေခွန် လျော့ပေါ့နှုန်းထားများကို ၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီး သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း Covid ကာလတွင် ဝယ်ယူသူများအတွက် ဝင်ငွေခွန် အထူးလျော့ချပေးရန် ပို၍လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ဝယ်ယူသည့်တန်ဖိုးငွေအားလုံး အတွက် ၃ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုသောနှုန်းထား သတ်မှတ်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါကြောင်း၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၄ ရာခိုင်နှုန်း ပေါင်းပါက နိုင်ငံတော်အခွန်ငွေ ၇ ရာခိုင်နှုန်းရရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များသည် နိုင်ငံ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက် သည့်အခါ၊ ကပ်ရောဂါဖြစ်သည့်အခါတွင် ပြည်သူများနှင့်တစ်သားတည်း အတူနေပြီး မိမိတို့ စွမ်းနိုင်သည့်ဘက်က ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါကြောင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ COVID-19 ကာလ စီးပွားရေးနလံထူနိုင်ရန် အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းအသစ်တည်ထောင်သူများ၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လိုသူများကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရုံး (MIC)တွင် ၎င်းတို့၏ Business Plan တင်ပြ၍ တရားဝင် မှတ်တမ်းပြုပြီးပါက ၎င်းတို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ပေးရန် တင်ပြအပ်ပါကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင် မြေကဲ့သို့ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော အခြေခံပစ္စည်းပါလာပါက တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၄ ရာခိုင်နှုန်း နိုင်ငံတော်က ကောက်ခံ ရရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
နိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီအသစ်များ များစွာထူထောင် ပေါ်ထွက်လာပါက ဝန်ထမ်းအလုပ်သမားအများစွာ အလုပ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နောင်လာမည့် (၂)နှစ်၊ (၃)နှစ် တွင် အောင်မြင်လာမည့် နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားကုမ္ပဏီအသစ်များသည် အမြတ်ခွန်များကို နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ ကုမ္ပဏီမပျက်မချင်း နှစ်စဉ်အစိုးရသို့ ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီအသစ်များ တိုးတက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများပြားလာခြင်း၊ ရေတိုရေရှည်ကာလတွင် နိုင်ငံတော်အခွန်များ တိုးတက်ရရှိခြင်း စသည် တို့သည် နိုင်ငံတော်စီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါကြောင်း။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် COVID-19 ကာလကြောင့် ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း စီးပွားရေးကျဆင်း နေပါကြောင်း၊ ယခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တွင်လည်း စီးပွားရေးတိုးတက်နှုန်းကို ကမ္ဘာက သုည ဒသမ ၅ GDP ရှိမည်ဟု သက်မှတ်သော်လည်း COVID-19 ကိုအခြေပြုပြီး စိတ်ဓာတ်မကျရန် လိုအပ် ပါကြောင်း၊ Zero Setting ထား၍ နိုင်ငံ၏ အတိတ်ကတိမ်းစောင်းခဲ့သော စီးပွားရေးမူဝါဒများကို တည့်မတ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပေါ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေများထဲမှလိုအပ်သည့် ဖြေလျှော့မှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြုလုပ်ပေးမည်ဆိုပါမကြာမီ အချိန်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်ပြောင်းလဲရန် သေချာပါကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးသည်။
ထို့နောက် ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ယခုအထိ ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းတွင် ကိုဗစ်ရောဂါပြန့်ပွားမှု မရှိသေးပါကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပိုင်းတွင် ကိုဗစ်နှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှု အားကောင်း သည်ဟု ပြောရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ လူသားများ၏ သဘာဝအရ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လက်ဆေးသည့်နေရာ၊ Mask တပ်သည့် နေရာ၊ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ခပ်ခွာခွာနေရမည့် နေရာတို့တွင် ပေါ့ဆလာတတ်ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်သမားများသည် လူစုပြီး ထမင်းစားခြင်း၊ စကားပြောခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသဖြင့် လူစုပြီးထမင်းမစားရန်၊ စကားမပြောရန် အမြဲတမ်း သတိပေးနေရပါကြောင်း၊ အခြားလုပ်ငန်းများနှင့် ရုံးဌာနများတွင် ယင်းပုံစံအတိုင်း ပြုမူ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ယင်းအပြုအမူများကို သတိထားရန် လိုအပ် ပါကြောင်း၊ တောင်သူလယ်သမားများသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် ခပ်ခွာခွာနေကြသော်လည်း ထမင်းစားချိန်တွင် လူစုပြီးထမင်းစားခြင်းသည် ကောင်းမွန်သည့် အလေ့အထဖြစ်သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် မပြုလုပ်ကြရန် အရေးကြီးပါကြောင်း။
အလုပ်သမားများ များပြားသည့်နေရာတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်သာ ရောဂါဖြစ်သွားမည် ဆိုပါက များစွာပြဿနာတက်နိုင်ပါကြောင်း၊ လူအများသို့ ရောဂါမြန်မြန်ကူးစက် သွားနိုင် ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အားလုံးက အလေးထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း။
အလုပ်အကိုင်ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီး တင်ပြသွားသကဲ့သို့ အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးရေးသည် များစွာအရေးကြီးသည့်အတွက် မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍသည် အလုပ်အကိုင်အများဆုံးပေးနိုင်သည်ကို လက်ခံပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ၃ မျိုးလုံးကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အားပေးလျက် ရှိပါကြောင်း၊ တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားများအတွက်လည်း အကျိုးရှိမည်၊ ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်ဖြင့် နေထိုင်ချင် သည့် ပြည်သူများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း အကျိုးရှိမည်၊ မိမိအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ကို မေးကြည့်သည့်အခါ ဝန်ထမ်းတော်တော်များများက ဝန်ထမ်းဘဝမှ အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်ဖြင့် နေထိုင်နိုင်သည့် အနေအထားရှိချင်ကြသည်ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားကြပါကြောင်း၊ တစ်သက်လုံး ပင်ပင်ပန်းပန်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပြီး အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ မည်သို့နေထိုင်ရမည်ကို မသိသည့် အနေအထားမျိုး မဖြစ်ချင်ကြပါကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့်လည်း နားလည်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်း ဆောင်ပြီးသည့်အခါ အေးအေးဆေးဆေးဖြင့် အသက်ကြီးသည့်အခါ သိက္ခာရှိရှိဖြင့် နေထိုင်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများကို ဦးစားပေးပြီး ဆောက်လုပ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည့်အတွက်လည်း ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိကြပါကြောင်း။
ကိုဗစ်ကာလတွင် အချို့လုပ်ငန်းများ မတွင်ကျယ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းသည် နိုင်ငံခြားမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မလာနိုင်ခြင်းကြောင့်ဟု သိရှိရပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် လိုအပ်သည့်နေရာများ၌ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် နည်းနည်းချင်း ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် တွေးမိသည်မှာ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများရှိရန် များစွာလိုအပ် ပါကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးဖက်တွင် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရန် လွယ်ကူပါကြောင်း၊ ထို့သို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့်ပုံစံဖြင့် လုပ်ကိုင်စေချင်ပါကြောင်း၊ အလုပ်သင်ရင်းဖြင့် မြင့်လာသည့်သဘောဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ပြည်သူများ၏ အလုပ်အကိုင် အရည်အချင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် လုပ်စေချင်ပါကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတော်ကလည်း တစ်ဖက်က တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ဖက်ကလည်း လုပ်ငန်းရှင်များကလည်း တာဝန်ယူရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အလုပ်သမားများကိုယ်တိုင်လည်း ယင်းစိတ်ဓာတ်မျိုး ရှိစေချင်ပါကြောင်း။
ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားများသည် တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖြန့်ပြီးသွားကြပါကြောင်း၊ မိမိ ခရီးသွားသည့်အခါ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အညာကအမျိုးများ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကို နေရာတိုင်းတွင်တွေ့ရပါကြောင်း၊ လမ်း၊ အဆောက်အဦနှင့် တံတားများ ဆောက်လုပ်နေစဉ် မိမိနှင့် လမ်းမှာတွေ့၍ နှုတ်ဆက်ပါက မကွေး၊ နတ်မောက်နှင့် ရေနံချောင်း မြို့တို့မှ အများစုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ချင်းပြည်နယ် ရောက်ခဲ့စဉ်ကလည်း မကွေးဘက်မှ လာရောက် လုပ်ကိုင်နေသူများကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်အခါတွင် ယင်းအလုပ်သမားများသည် အိမ်ပြန် သွားကြသည့်အတွက် အလုပ်များ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် အလုပ်များကိုလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်နိုင်မည့်ကာလ ရောက်သည်နှင့်အမျှ အမြန်ပြန်ပြီးစရန် လိုအပ်ပါကြောင်း။
ဒေသခံများ၏ ဆောက်လုပ်ရေး လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး အလုပ်သမား များ အလုပ်ပြန်လည်ရရှိပြီး ဝင်ငွေရရှိလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စများသည် အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီး လုပ်ဆောင်ရမည့် ကိစ္စဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာချေးငွေဖြင့် လုပ်ကိုင် ရသည့် လုပ်ငန်းများရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာချေးငွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမြဲသတိပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ချေးပြီး ပြန်ပေးရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ပြန်ပေးရသည့်အခါ နိုင်ငံတကာတွင် ၂ မျိုးရှိပါကြောင်း၊ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် လုပ်သည့်အခါရှိသကဲ့သို့ ချေးငွေဖြင့် လုပ်သည့်အခါများလည်း ရှိပါကြောင်း၊ ချေးငွေဖြင့် လုပ်သည့်အခါ တစ်နေ့တစ်ချိန်တွင် ပြန်ပေးရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ သိက္ခာအရသာမက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်တွင် စီးပွားရေးအရ ယုံကြည်မှုရှိလာရန် ချေးငွေများကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပြန်ပေးရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသည့် နိုင်ငံများ၏ ချေးငွေများလျော်ပေးရန် အစီအစဉ်လုပ်ဆောင်နေပါကြောင်း၊ ယင်းအစီအစဉ်များ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသည့် နိုင်ငံများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါကြောင်း၊ မူအားဖြင့် မိမိတို့ချေးထားသည့်ငွေကို မိမိတို့ပြန်ပြီးဆပ် နိုင်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ဆပ်နိုင်အောင် မိမိတို့ကလည်း ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သည့်အခါ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်နေသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုသာမက မိမိတို့ နိုင်ငံစီးပွားရေးယန္တရားလည်ပတ်မှုကို တွန်းအားပေးနေသည့် နည်းတစ်နည်းအဖြစ် စိတ်မှာထားပြီးလုပ်စေလိုပါကြောင်း၊ ကျဉ်းကျဉ်းလေး ကြည့်၍မရပါကြောင်း၊ မိမိတို့ စီးပွားရေးယန္တရားကြီး ဆက်စပ်ပြီး လည်ပတ်သွားနိုင်ရန် စဉ်းစားရပါကြောင်း၊ ထိုသို့ စဉ်းစားရာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို အင်မတန် အလေးထားပါကြောင်း။
ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များသည် မိမိတို့ ပြောကြားချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကြောင်း၊ (၂) ရက်၊ (၃) ရက်အလုပ် မလုပ်ရပါက ပြဿနာဖြစ်သွားပါကြောင်း၊ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့ရပါကြောင်း၊ ယင်းကို စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရေရှည်တွင် မိမိတို့၏ ပြည်သူများ၊ အလုပ်သမားများ စီးပွားရေးအရ လုံခြုံရေးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ချမ်းသာရေးဆိုသည်မှာ နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အခြေခံလုံခြုံရေး ရှိရန်လိုပါကြောင်း၊ မိမိအမြဲတမ်းပြောသည်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ တည်ငြိမ်မှုသည် လုံခြုံရေးအပေါ်တွင် ဆိုင်ပါကြောင်း၊ လုံခြုံရေးသည် ပြည်သူများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးဖြစ်ပြီး ဆက်စပ်နေပါကြောင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် သားသမီးများ ကျောင်းတက်သည့် အခါတွင် မည်သည့်နေရာမှ စရိတ်ရှာရမည်ကို စိတ်ပူနေရပါက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးမရှိပါကြောင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးမရှိခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်သွားပါကြောင်း။
ယင်းတို့ကို မိမိတို့အနေဖြင့် စဉ်းစားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်ကာလတွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိသည့် မိမိတို့ပြည်သူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်ထားပါကြောင်း၊ ယင်းကိုလည်း အားလုံးသိရှိပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာများ ဖြန့်ဝေပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ငွေအရ ပံ့ပိုးခြင်းများရှိပါကြောင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့် ပြည်သူများအတွက် စိတ်လုံခြုံမှု အတိုင်းအတာအထိ စိတ်ချရစေရန် နိုင်ငံမှ တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အရေးကြီးဆုံးမှာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ပုံမှန်သွားနေပြီး ပြည်သူများသည် စီးပွားရေးအရ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ လုံလောက်သည်အထိ ရောက်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဦးဌေးလွင် ပြောသွားသည့်အချက်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာအကြောင်း ပါဝင်ပါ ကြောင်း၊ လရောင်တောတွင် အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ပါကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဆိုသည်မှာ တောင်ယာလုပ်ကိုင်သည်တင်မက ပန်းခြံ၊ ဥယျာဉ် လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရန်ကုန်ကဲ့သို့ မြို့ကြီးတွင် လမ်းဘေးတချို့နေရာတွင် သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးထားပါကြောင်း၊ သို့သော် စိုက်ပျိုး ထားသည်မှာ မလှပပါကြောင်း၊ တင့်တင့်တယ်တယ် မရှိလှပါကြောင်း၊ ယင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး ပညာအားနည်းနေ၍ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးပညာဆိုသည်မှာ သစ်ပင်တစ်ပင်ကို အသေးမှ အကြီး ဖြစ်သည်သာမက မည်သို့ပုံစံဖြင့် စိုက်မည်၊ ကြာကြာခံစေရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်မည်၊ မည်သည့် သစ်ပင်သည် ပို၍ အဆင်ပြေမည်၊ လမ်းတွင်ဆိုပါက အရိပ်လည်းရပြီး ကြည့်ကောင်း စေရန်၊ ကားများနှင့်လည်းလွတ်စေရန်၊ လိုအပ်ချက်အရ မည်သို့ဖြစ်အောင် လုပ်ရမည်ကို စဉ်းစား တတ်စေရန်နှင့် ပန်းများပြုစုပျိုးထောင်သည့်အခါတွင် မည်သည့်ပန်းသည် မည်သည့်နေရာတွင် စိုက်ပျိုး၍ ကောင်းမည်ကို စဉ်းစားတတ်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စားသောက်ပင်များသာမက ပတ်ဝန်းကျင်လှပရန်အတွက် ပန်းများလည်းလိုအပ်ပါကြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်လှပခြင်းဆိုသည်မှာ လူများ၏စိတ်ကို အေးငြိမ်းချမ်းသာစေပါကြောင်း၊ ယင်းမှာလည်း အရေးကြီးပါကြောင်း။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာကျောင်းများကို မိမိအနေဖြင့် အားပေးလိုပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ် သွားစေ လိုပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာကြီးရှိ အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ချို့တွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာသည် တက္ကသိုလ်ပညာနှင့် တန်းတူအဆင့်ရှိပါကြောင်း၊ ပြည်သူများသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ ကျောင်းထွက်ဆိုသည်မှာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများနှင့် တန်းတူ၊ အသိပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင် များနှင့်တန်းတူ သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိပါကြောင်း၊ လက်သမားနှင့် ပတ်သက်၍ ကြုံကြိုက်တိုင်း ပြောသည့်ကိစ္စတစ်ခုရှိပါကြောင်း၊ ယင်းမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာစနစ် အအောင်မြင်ဆုံးနိုင်ငံထဲတွင် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံပါဝင်ပါကြောင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံ သေးငယ်သော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပညာရေးစနစ်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ များစွာအောင်မြင်ပါကြောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျောင်းသို့ သွားသည့် ကလေးရှိသကဲ့သို့ တက္ကသိုလ်သွားသည့် ကလေးများ ရှိပါကြောင်း၊ ယင်းကလေးများ ကြားထဲတွင် မည်သူကသာသည်ဆိုသည့် ခွဲခြားမှု မရှိပါကြောင်း။
မိမိဆွစ်ဇာလန်ရောက်သည့်အခါ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကျောင်းမှ ကျောင်းသား တစ်ချို့နှင့်တွေ့ချင်သည့်အတွက် စီစဉ်ပေးပါကြောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ ကျောင်းတက်နေသည့် ကလေးတစ်ယောက် ပါဝင်လာပါကြောင်း၊ မတူညီသည့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပညာကျောင်း (၄)ကျောင်းတွင် သင်ကြားသည့် ဘာသာရပ်များလည်း မတူညီပါ ကြောင်း၊ မိမိတွေ့ခဲ့သည့် ကလေး (၄) ယောက်တွင် ၎င်းကလေး တစ်ယောက်ကို သဘောကျ ပါကြောင်း၊ ၎င်းကလေးကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လက်သမားပညာသင်ချင်သည်ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ရခြင်းကို မေးကြည့်ပါကြောင်း၊ ၎င်းက မိမိအနေဖြင့် ဂီတဝါသနာပါကြောင်း၊ ဂီတပညာရှင် ဖြစ်ချင်ပါကြောင်း၊ သို့သော် အသက် (၁ဝ)နှစ် (၁၁)နှစ်တွင် ပါရမီ မပါသည်ကို သိရှိသည်ဟူ၍ ဖြေကြားပါကြောင်း၊ ၎င်းကလေးမှာ များစွာရင့်ကျက်ပါကြောင်း၊ ၎င်းအသက်(၁၁)နှစ်ခန့်တွင် ၎င်းကိုယ်၎င်း သိနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းသည် ဂီတကို မြတ်နိုး၍ ဂီတလောကထဲတွင် နေချင်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းစိတ်ထဲတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးတယောများ လုပ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးတယောများ လုပ်ရန်မှာ အခြေခံ လက်သမားပညာ စတင်သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်လက်သမားပညာ သင်တန်း ကျောင်းကိုသွားခြင်းဖြစ်သည်ကို ပြောသည့်အတွက် မိမိအနေဖြင့် များစွာ သဘောကျပါကြောင်း၊ ၎င်းကလေးသည် အမြော်အမြင်ရှိပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပါကြောင်း၊ ၎င်း အနေဖြင့် ယင်းကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်၍ရမည်၊ မရမည်ကို လူကြီးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ရင့်ကျက်စွာ စဉ်းစား၍ ၎င်းလမ်းကို ၎င်းကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပါကြောင်း၊ လက်သမားအလုပ်ကို စတင်သင်ကြား၍ တစ်ဆင့်ခြင်း တက်သွားပြီး တစ်နေ့တစ်ချိန်တွင် ကမ္ဘာကျော် တူရိယာများ ထုတ်လုပ်သည့် အတတ်ပညာရှင်ကြီး ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည့် ယုံကြည်ချက်လည်း ၎င်းတွင်အပြည့်အဝရှိပါကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပညာကျောင်းများလည်း မိမိတို့နိုင်ငံတွင် တိုးပွားလာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလိုပြီး ကြိုးစားနေပါကြောင်း၊ သို့သော် အချိန်အနည်းငယ်ယူရပါကြောင်း၊ ကျောင်းတစ်ကျောင်း တည်ထောင်ရန်မှာ အချိန်ယူစဉ်းစား၍ နေရာရှာပြီး လိုအပ်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများကို ရှာရပါကြောင်း၊ သို့သော် ယင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်သမားဆရာသာမက တစ်ချိန်တစ်ခါတွင် ကမ္ဘာကျော်တူရိယာလုပ်သည့် ဆရာကြီးဖြစ်သွားနိုင်သည်ဆိုသည့် အတွေး မိမိ ခေါင်းထဲတွင် အမြဲရှိပါကြောင်း၊ တတ်လမ်းများစွာ ရှိစေမည့် ပညာရေးစနစ်ကိုလည်း ဖန်တီးပေးလို ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် ယခုအချိန်တွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့် အလုပ်သမားများသည်ပုံမှန် ဝင်ငွေရရှိပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှု ရရှိသည့်အခြေအနေကိုလည်း ဖန်တီးပေးလိုပါကြောင်း၊ ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း နိုင်ငံတော်မှ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပါကြောင်း၊ သို့သော် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း ပါဝင်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း။
လုပ်ငန်းရှင်ဘက်က တင်ဒါကိစ္စ၊ အခွန်အကောက်ကိစ္စ၊ ချေးငွေကိစ္စ၊ ယင်းကိစ္စများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဥပဒေများကို တင်ပြသွားပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အပိုင်းက လုပ်ပေးနိုင်သည့်ကိစ္စအားလုံးကို သုံးသပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ Video Conferencing တစ်နာရီအတွင်း ပြောသည့်ကိစ္စရပ်အားလုံးကို အလေးအနက်ထားပါကြောင်း၊ ယခု ဆွေးနွေးချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများက သေသေချာချာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မည်သို့ ကူညီနိုင်မည်၊ နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်၊ ပံ့ပိုးနိုင်မည်ကို စဉ်းစားပါ ကြောင်း၊ တင်ပြသွားသည့်အထဲတွင် အရေးကြီးသည့်အချက်က အလုပ်သမားများ၏ နေရေး ထိုင်ရေးပြဿနာ၊ နေစရာမရှိသည့်ကိစ္စဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စအတွက် မည်သို့ ကူညီရမည်ကို လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် နိုင်ငံတော်ဘက်က ကြည့်ရှုပေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ နောက်တစ်ခုမှာ အလုပ်သမား သားသမီးများ၏ ပညာရေးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပညာရေးကို အထူးအလေးထားပါကြောင်း၊ ပညာရေးသည် မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ပြည်သူပြည်သားများ၏ ကလေးများ ပညာရေးကို မည်သို့ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်ကို စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ငွေရေးကြေးရေး မလုံလောက် သဖြင့် ပညာမသင်ပေးနိုင်သည့် အဖြစ်မျိုး မဖြစ်စေလိုပါကြောင်း၊ ပညာရေးစနစ်သည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ တကယ့်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရန်အတွက် ကြိုးစားရပါကြောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာ များသည်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ယင်းမှာ ယခုခေတ်၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရမှ ပညာတတ်သည်ဆိုသည့်ခေတ်က ခေတ်ဟောင်းကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ စီးပွားရေးအရ အင်မတန်မှ တိုးတက်အောင်မြင်ပါသည် ဆိုသည့် အချို့နိုင်ငံများတွင် တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ ပညာရေးကို အဓိကထားခဲ့သဖြင့် ပြဿနာများပေါ်လာသည်ကို ကြုံတွေ့ရပါကြောင်း၊ တက္ကသိုလ်ကရသည့် ဘွဲ့များသည် ယခုခေတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီဘဲဖြစ်နေပါကြောင်း။
ထို့ကြောင့် တိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံများက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာဘက်ကို ပြောင်းလဲ ရန် ကြိုးစားနေခြင်းများရှိပါကြောင်း၊ သို့သော်လည်း အခြေခံမကောင်းသည့်အခါတွင် သိပ်မလွယ်ကူ ပါကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ ပြည်သူများက တက္ကသိုလ်ပညာဘွဲ့ရမှ ပညာတတ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထား ပါက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကို အောင်မြင်တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် လွန်စွာ ခက်ခဲလာပါကြောင်း။
ယင်းနေရာတွင် မိမိတို့နိုင်ငံက အခွင့်သာသည်ဟု ပြောလိုပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ပြည်သူများ သည် လက်တွေ့ကျကျဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို လိုလားကြပါကြောင်း၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပညာကို လူငယ်များရော၊ မိဘများကပါ လိုလားသည့်ဘက်ကို ဦးတည်နေကြောင်း တွေ့ရသည့်အတွက် နိုင်ငံအတွက်အလွန်ကောင်းသည့် လက္ခဏာဟု ယူဆပါကြောင်း၊ မိမိတို့ အနေဖြင့်လည်း တတ်နိုင်သမျှ အားပေးပံ့ပိုးပေး သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရသည့် မိမိတို့ပြည်သူများသည် အလုပ်အကိုင် ၂ ရက်၊ ၃ ရက် ရပ်သွားပြီ ဆိုပါက ဒုက္ခရောက်ကြရပါကြောင်း၊ ပြည်သူများ၏ စီးပွားရေးလုံခြုံမှု၊ ဝင်ငွေလုံခြုံမှု မည်သို့ ဖြေရှင်းရမည်ကို စဉ်းစားရပါကြောင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့် ပြည်သူများ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိအောင် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည့်ကိစ္စသည် ပို၍ အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ထောက်ပံ့ ပေးခြင်းသည် တစ်နည်းအားဖြင့် ကုသပေးခြင်းဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ကုသခြင်းထက် ကာကွယ်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် COVID ကို ကိုင်တွယ်သည့်နေရာတွင် အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိအောင်မြင်မှုရှိသည်ဟု ပြော၍ရပါကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေးကို စောစောစီးစီးကတည်းက စတင်ပြီး အာရုံစိုက်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက COVID ကာကွယ်ရေး ခြေလှမ်းများကို စတင်လှမ်းခဲ့ပါကြောင်း၊ COVID ကာကွယ်ရေး ခြေလှမ်းများလှမ်းရာတွင် အစောဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ပြော၍ ရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်လည်း ယခုအခြေအနေအထိ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆက်လက်၍လည်း ထိန်းချုပ်ထားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ပြည်သူများ၏ လုံခြုံမှု၊ လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် မဖြစ်သင့်သည်များ မဖြစ်အောင် ယခုချိန်ကစပြီး ကာကွယ်သည့် ခြေလှမ်းများကိုလည်း လှမ်းရပါကြောင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပြီးမှ ကုသခြင်းထက် ကာကွယ်သည်က ပိုကောင်းပါကြောင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိသည့်အတွက် ဝင်ငွေပြတ်သွားပြီး ဒုက္ခရောက်သည့်အခါမှ ကူညီခြင်းထက် ဝင်ငွေမပြတ်အောင် မည်သို့နည်းလမ်းများ ချမှတ်ရမည်ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များဘက်က ဝိုင်းပြီး စဉ်းစားပေးစေလိုပါကြောင်း။
မိမိတို့၏ အလုပ်သမားများဘက်ကလည်း အကြံဉာဏ်များပေးလိုလျှင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရဲရဲတင်းတင်း ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကျောင်းများပို၍ ဖွင့်ပေးရန်မှာ နိုင်ငံတော်၏ ဆန္ဒ၊ မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီပါကြောင်း၊ အမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်ပြောရလျှင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီး ပါကြောင်း၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အရေးကြီးကြပါကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးသည်လည်း အရေးကြီးပါ ကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းတွင် ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမှ စီးပွားရေးလည်း ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နီးစပ်မှုရှိနိုင်မှ မိမိတို့၏ ပြည်သူပြည်သားများ ကြားထဲတွင်လည်း စည်းလုံးမှု ပိုပြီးရှိလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တချို့နေရာများတွင် တစ်ရွာနှင့် တစ်ရွာ တစ်မျှော်တစ်ခေါ် သွား၍မရသည့်အတွက် တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ သိပ်ပြီးရင်းနှီးမှုမရှိကြပါကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းလာလျှင် မိမိတို့ ပြည်သူများကြားတွင်လည်းပို၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံတော်၏ တိုးတက်မှုကို အားပေးရာ ရောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် ပတ်သက် လျှင် ပထမမှန်မှန်စားနိုင်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဝတ်ရေးတွင် လှလှပပသားသားနားနား ဝတ်ခြင်း ထက် သိက္ခာအရ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်နိုင်ရန် လိုအပ်သလောက်ရှိရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နေရေးတွင် မိမိအိမ်သို့ ပြန်သွားပြီဆိုလျှင် မိမိအတွက် လုံခြုံသည့်နေရာ၊ မိမိ၏ ပိုင်နက်ဆိုသည့် စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ပြည်သူများ မိမိကိုယ်ကို မိမိယုံကြည်မှုရှိလာစေရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဘက်တွင် အောင်မြင်အောင် ဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီပေးကြသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
(Myanmar State Counsellor Office)
Published in Video သတင်း July 07 2020	0
Published in ဆောင်ရွက်မှုသတင်းများ July 07 2020	0
ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းသည် ရန်ကုန်မြို့မှ ပုသိမ်မြို့သို့ ၁၁၃ မိုင် ၂ ဖာလုံ ရှည်လျားပြီး ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်း မိုင် (၄၁/၃) ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတားမှတစ်ဆင့် ဓနုဖြူ၊ ဟင်္သာတ၊ ကြံခင်း၊ မြန်အောင် မြို့များ၊ မိုင်(၅၆/၀)မှ မြောင်းမြ၊ ဝါးခယ်မမြို့များ မိုင်(၃၃/၀) ကဇန်းလမ်းဆုံမှ မအူပင်မြို့များသို့ သွားလာရသော အဓိကလမ်းမကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခင်မူလလမ်းမှာ အကျယ် ၂၄ ပေနှစ်လမ်းသွား ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အပိုင်းမှာ မိုင် (၁၇/၄) မှ စတင်သည်။ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရခြင်း ယခုကာလတွင် ရန်ကုန်မှ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတားအထိ တစ်နေ့ပျမ်းမျှယာဉ် (၃၈၀၀) စီး၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်း တံတားမှ ပုသိမ်မြို့သို့ တစ်နေ့ပျမ်းမျှယဉ် (၂၇၀၀) စီး ဖြတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိပြီး ရုံးပိတ်ရက်များ၊ ခရီးသွား ကာလတွင် ရန်ကုန်မှ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတားအထိ တစ်နေ့ပျမ်းမျှယာဉ် (၆၀၀၀) စီးခန့်၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတားမှ ပုသိမ်မြို့သို့ တစ်နေ့ပျမ်းမျှယဉ် (၄၀၀၀) စီးခန့်ဖြတ်သန်း သွားလာလျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်မှ ဗိုလ်မြတ်ထွန်း တံတားအထိ အပိုင်းသည် ယာဉ်သွားလာမှုများပြားပြီး အရေးကြီးသော လမ်းပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် မူလလမ်းမှာ အကျယ် ၂၄ ပေနှစ်လမ်းသွား ကတ္တရာလမ်းမှ ၃၀ ပေ အကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ကျပ် သန်း ၂၉၀၀၀ ဖြင့်စတင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွဲဝေလုပ်ဆောင် ရန်ကုန်-ပုသိမ် လမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရာတွင် မိုင်တိုင်(၀/၀) မှ (၁၇/၄) ထိ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် Oriental Highways Co.,Ltd တို့မှလည်းကောင်း၊ မိုင်တိုင် (၁၇/၄ မှ ၄၁/၄) အထိ လမ်းပိုင်းအား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လမ်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ဦးဆောင်၍ လမ်းအထူးအဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့နှင့် ခရိုင်(၂) ဖွဲ့တို့မှ အင်ဂျင်နီယာစုစုပေါင်း (၄၅) ဦး၊ ကာယလုပ်သား (၄၆၈) ဦး၊ လမ်းဦးစီးဌာနပိုင် စက်၊ ယာဉ်၊ ယန္တရား (၁၅၇) စီးဖြင့် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေသည်။ တိုင်းဒေသကြီး လမ်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (မြို့ပြ) ဦးရန်နိုင်ဇော်က လုပ်ငန်းခွင်တွင် မလွတ်ကင်းသော ဓာတ်တိုင်များ၊ သစ်ပင်များ၊ ကျူးကျော်နေအိမ်များ ဖယ်ရှားသော လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှကြီးကြပ်၍ မအူပင်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဆောင်သော လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပထမဆုံးလူနာ တွေ့ရှိပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် လူစုလူဝေး ပြုလုပ်ခြင်းအား တားမြစ်ခြင်း ညမထွက်ရ အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း စသည့်ကန့်သတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် မဟာသင်္ကြန် ရုံးပိတ်ရက်များကြောင့်၊ လုပ်သားများအကြားတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက် ပြန့်ပွားမှုအား ကြောက်ရွံ့၍ လုပ်သားများ လုပ်ငန်းခွင်စွန့်ခွာမှု မရှိစေရေးအတွက် စည်းရုံး၍ လုပ်ငန်းအား အရှိန်အဟုန်မပျက် အချိန်မီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း၊ အဆိုပါလမ်းပိုင်းတွင် ယာဉ်မောင်းသူများ သတိပြုမောင်းနှင်ရမည့် နေရာများအနေဖြင့် ကျောင်း (၂၆) ကျောင်း၊ ကွေ့မ (၆၈) ခု၊ T လမ်းဆုံ (၄) ခု၊ Y လမ်းဆုံ (၈) ခုနှင့် S လမ်းဆုံ (၄) ခုရှိကြောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းလမ်းပိုင်း အောင်မြင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် လမ်းဦးစီးဌာနရုံးချုပ်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာချုပ်တို့ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယခုအချိန်ထိ လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၉၄% ပြီးစီးနေကြောင်းနှင့် လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အသိပေးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိစပ်သော အပိုင်းများက Steel Sheet Pile, PVC Sheet Pile များရိုက်ခြင်း လမ်းတာဘောင်များတွင် မြက်များစိုက်ပျိုး၍ တာဘောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့မှ ပုသိမ်မြို့သို့ ယခင်ကာလက (၅) နာရီခန့် သွားလာရာမှ ယခုကွန်ကရစ် လမ်းသစ်ပြီးစီးသွားပါက ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှု မရှိဘဲ (၃) နာရီကျော်ဖြင့် သွားလာနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ MOI Webportal ကိုတွတ်(ပြန်/ဆက်) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
Published in တင်ဒါကြော်ငြာများ June 24 2020	0
Published in တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း June 22 2020	0
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အဆောက်အဦဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါခေါ်ဆိုမှုအခြေအနေအား ပူးတွဲပါ Attached file တွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
Published in တင်ဒါကြော်ငြာများ June 22 2020	0
Published in ဆောင်ရွက်မှုသတင်းများ June 22 2020	0
ရန်ကုန် - ပုသိမ်လမ်း မိုင်တိုင် (၂၂/၃-၂၂/၄)အတွင်း (ကွန်ကရစ် အင်အားရရှိရန် သတ်မှတ်ရက် စောင့်ဆိုင်းနေရ၍ မော်တော်ယာဉ်များ ဖြတ်သန်း မရသေးသော လမ်းတစ်ခြမ်းအပိုင်း) နှင့် မိုင်တိုင် (၂၁/၀-၂၁/၂)အတွင်း (မဲဇလီ စစ်ဆေးရေးဂိတ်နေရာ လမ်းတစ်ခြမ်းခင်းပြီး၍ ကျန်တစ်ခြမ်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောအပိုင်း)တို့တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မရှိစေရေးအတွက် လမ်းဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်း(၈)ဦး၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ(၄)ဦး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်(၈)ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၂၀)ဦးဖြင့်မ်ာတော်ယာဉ်များအား အလှည့်ကျ လွှတ်သည့်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိသည့် လမ်းတစ်ခြမ်း အရှည်(၁၄၀၀)ပေ ခန့်အား အမြန်ဆုံး ပြီးစီးနိုင်ရေးအတွက် လမ်းဦးစီးဌာန မှ Batching Plant (၂)လုံး ၊ ကွန်ကရစ်သယ်ယာဉ်(၅)စီး ၊ ဝန်ထမ်းအင်အား(၆၀)ဦးခန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မော်တော်ယာဉ်များ အနေဖြင့် အလှည့်ကျ စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် အချိန်တွင် ကျော်တက်ခြင်း မပြုဘဲ စိတ်ရှည်သည်းခံစွာ ကူညီပေးပါရန် နှင့် လမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ဆဲကာလအတွင်း လမ်းအသုံးပြုသူ ခရီးသွားပြည်သူများ၏ အဆင်မပြေမှုများအတွက် လမ်းဦးစီးဌာနမှ မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ (လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)
Published in ဝန်ကြီးဌာနလှုပ်ရှုားမှုသတင်းများ June 16 2020	0
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ကျော်လင်း ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဝင်းတင့် ၊ အဆောက်အဦ ၊ လမ်း ၊ တံတားနှင့် မြိုပြနှင့်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကျေးလက်လမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့်အတူ ယမန်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်မှ Video Conferencing ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အဆောက်အဦ ၊ လမ်း ၊ တံတား ၊ မြို့ပြအိမ်ရာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျေးလက်လမ်း / တံတားများ တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့ကို ကြည့်ရှုစစ် ဆေးပြီး တာဝန်ရှိသူများအား လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များမှာကြားသည် ။
ရှေးဦးစွာ တံတားဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ကောင်းချိုနှင့် Contractor ကုမ္မဏီမှတာဝန်ရှိသူတို့က ကိုရီးယား - မြန်မာချစ်ကြည်ရေး (ဒလ)တံတားတည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်ဘက်ခြမ်းနှင့် ဒလဘက်ခြမ်း ချဉ်းကပ်တံတားတိုင် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ရေလယ်ပင်မတံတား ဘိုးပိုင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှု ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်ထိခိုက်မှုမရှိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ကိုရီးယား - မြန်မာချစ်ကြည်ရေး (ဒလ) တံတားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့ကို Video Clip ဖြင့်ပြသသည်။
ထို့နောက် တံတားဦးစီးဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးကျော်လင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ပဲခူးမြစ်ကူး သန်လျင် တံတားအမှတ်(၃)တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ သန်လျင်ဘက် ခြမ်းနှင့် သာကေတ ဘက်ခြမ်းတို့တွင် တံတားတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ ရေလယ်တိုင်ဘိုးပိုင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတို့ကို Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု အခြေအနေတို့ကို Video Clip ဖြင့် ပြသသည်။
ထို့ပြင် တံတားဦးစီးဌာန ၊ တံတားအထူးအဖွဲ့(၁၀)မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (မြို့ပြ) ဦးမျိုးသက်ထွန်း က ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား (ဒါးပိန် - သပြု ) တံတား တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့ကို Video Clip ဖြင့် ပြသသည်။
ယင်းနောက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ) ဦးထင်ကျော် က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော လမ်း ၊ တံတား အခြေအနေကိုလည်းကောင်း၊ခရိုင်( ၄ )ဖွဲ့နှင့် အထူးအဖွဲ့(၃)ဖွဲ့တို့ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အခြေအနေကိုလည်းကောင်း ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတို့ကိုလည်းကောင်း Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု အခြေအနေတို့ကို Video Clip ဖြင့် ပြသသည် ။
ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးလက်လမ်းဖွံဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေး မှူး(မြိုပြ) ဉီးသက်ဇော်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင် ၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ် ၊ ဉက္ကံ - သကြားစက် (တဘူးလှဆည်လမ်း) ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု ၊ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မိုင်တိုင် ၀/၀ မိုင်မှ ၅ / ၀ မိုင်ထိ ပျက်စီးနေသော ကတ္တရာလမ်းအား ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း ၊ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် ၅/၂ မိုင်မှ ၁၂ /၂ မိုင် အတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း(၇)မိုင်နှင့် ကတ္တရာ ခင်းခြင်း (၀/၅)မိုင် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု ၊ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံ ငွေဖြင့် ကွန်ကရစ်လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကိုလည်း ကောင်း၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ၊ သုံးခွမြို့နယ် ၊ ဖရုံလမ်းခွဲ - အဇန်းတောစွန်း - ပင်လယ် ချောင်ကျေးရွာ ချင်းဆက်လမ်းအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အလိုက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် တိုးတက်မှု အခြေ အနေတို့ကို video clip ဖြင့် ပြသသည်။
ယင်းနောက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ဦးမြင့်နိုင်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် အိမ်ရာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို Power Pointဖြင့် ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
ထို့နောက် အဆောက်အဦဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ) ဦးကိုကိုအေးက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတည်ဆောက် ခြင်း စီမံကိန်း ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတိုးချဲ့(၄)ထပ် ဆောင်တည်ဆောက်နေမှု ၊ သမဝါယမ တက္ကသိုလ်(သန်လျင်) ဘက်စုံသုံးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေမှု ၊ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အဆင့်မြှင့်(၇)ထပ်ဆောင် တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်(၁၀၀)ပြည့် တက္ကသိုလ် ဓမ္မာရုံကြီးပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လည်းကောင်း။
ဆက်လက်၍ ကြည့်မြင်တိုင် အရိုးရောဂါကု ဆေးရုံတိုးချဲ့( ၅ )ထပ်ဆောင် တည်ဆောက် ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းဆေးရုံတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု ၊ ရန်ကုန်မြို့ ပေါ်ရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရန် လူပျို / အပျိုဆောင်(၈)ထပ် တည်ဆောက်ပြီး စီးမှု ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံတိုးချဲ့( ၄ )ထပ်ဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် လုပ်ငန်း တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့ကို Video Clipဖြင့် တင်ပြသည်။
တင်ပြချက်များအပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း အဆောက်အဦ ၊ လမ်း ၊ တံတား၊ မြို့ပြအိမ်ရာကဏ္ဍနှင့် ကျေးလက် လမ်း/ တံတားများ ကဏ္ဍအလိုက်တိုးတက်လာပါကြောင်း၊ ကိုရီးယား - မြန်မာချစ်ကြည်ရေး (ဒလ)တံတား သည် ရန်ကုန်မြို့ လယ်နှင့်ဒလမြို့လူနေရပ်ကွက်တို့ကို ဆက်သွယ်တည်ဆောက်နေသည့် အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဘေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ရေကြောင်းသွား သင်္ဘောများအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန် သတိပေးအမှတ်အသား များထားရှိဆောင်ရွက်ရန်လိုပါကြောင်း၊ တံတားကြီးပြီး စီးသွားပါက ရန်ကုန်မြို့နှင့်ဒလမြို့တို့ကို အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အလားတူ ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား သန်လျင်တံတားအမှတ်(၃) တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက ရန်ကုန်မြို့ ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖြေလျော့ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ တည်ဆောက်ထားသော သန်လျင် - သီလဝါအထူး စီးပွာရေးဇုန်ကို ဆက်သွယ်သည့် လမ်းမကြီး ပြီးစီးခဲ့သည့်အတွက် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူ အဆင်ပြေပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများ စံချိန်စံညွှန်း နှင့်အညီ သတ်မှတ်အချိန်မီပြီးစီးရေး အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်ရန်တို့ကိုမှာ ကြားခဲ့ပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ကျော်လင်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဝင်းတင့်၊ အဆောက်အဦ၊ လမ်း၊ တံတားနှင့် ကျေးလက် လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန တို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်များသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည် တော် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်း အဝေးခန်းမဆောင်မှ Video Conferencing ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)အတွင်းရှိ အဆောက်အဦ၊ လမ်း၊ တံတား၊ မြို့ပြအိမ်ရာ ကဏ္ဍနှင့် ကျေးလက် လမ်း/တံတားများ ဟန်ချက်ညီညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် လက်ရှိလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နေမှုနှင့် တိုးတက် မှုတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး တာဝန်ရှိသူများအား လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ မှာကြားသည်။
ရှေးဦးစွာ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) လမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ) ဦးသူရဇော်က ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)အတွင်းရှိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသော လမ်း၊ တံတားများ၊ ခရိုင်လေး ဖွဲ့နှင့် အထူးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေ သည့် မိတ္ထီလာ-တောင်ကြီး-ကျိုင်းတုံ-တာချီလိတ်လမ်း၊ နမ့်စန်-မိုးနဲ-တာဆန်း-မိုင်းတုံ-မိုင်းဆတ်လမ်း၊ မိုင်းဆတ်-တာချီလိတ် လမ်း၊ မိုင်းပျဉ်း-မက်မန်းလမ်း၊ ကျိုင်းတုံ- မိုင်းခွန်-မိုင်းခုတ်လမ်း၊ ကျိုင်းတုံလေယာဉ် ကွင်းလမ်း၊ တာချီလိတ်မြို့ရှောင်လမ်းနှင့် တာလေမြို့ရှောင်လမ်း လုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ထားရှိမှု၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ လေးနှစ်တာ ကာလအတွင်း လမ်း၊ တံတားတိုးတက်မှု အခြေအနေ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတို့ကို Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုတို့ကို Video Clip ဖြင့် ပြသသည်။
ထို့နောက် တံတားဦးစီးဌာန တံတား အထူးအဖွဲ့ (၁၂) မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (မြို့ပြ) ဦးသန့်ဇင်က ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ နှစ် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)အတွင်း ပြည်နယ် ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တံတားများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ဆောင်ရွက်ဆဲနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများနှင့် တံတားစီမံကိန်းများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိ မှုတို့ကို Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု အခြေ အနေတို့ကို Video Clip ဖြင့် ပြသသည်။
ယင်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူး(မြို့ပြ) ဦးဝင်းရှိန်က ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)အတွင်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် လမ်းအဆင့်အတန်းအလိုက် ဦးစား ပေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ Pilot Project ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ၊ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်ထောင်စု(ငွေလုံး/ ပြင်ထိန်း)၊ ပြည်နယ် (ငွေလုံး/ ပြင်ထိန်း) ရန်ပုံ ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် လမ်း/ တံတား လုပ်ငန်းများ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်ထောင်စု (ငွေလုံး/ပြင်ထိန်း)၊ ပြည်နယ် (ငွေလုံး/ပြင် ထိန်း)ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အခြေအနေ တို့ကို Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)အတွင်း ကျေးလက်လမ်း/ တံတား လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် လုပ်ငန်း တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့ကို Video Clip ဖြင့် ပြသသည်။
ယင်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန လက် ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းအောင်က ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)အတွင်း ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသော မြို့ပြအိမ်ရာ ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ) ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက ရှမ်းပြည် နယ် (မြောက်ပိုင်း)အတွင်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် လမ်း ၉၄ လမ်း ၃၁၅၈ မိုင် ကျော် ရှိရာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ စီမံခန့် ခွဲသောလမ်း ၁၄ လမ်း ၈၃၅ မိုင်ကျော်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ စီမံခန့် ခွဲသောလမ်း ၈၀ မှ ၂၃၂၃ မိုင်ကျော်အား ဒေသအလိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု နှင့် လမ်းတံတားများအခြေအနေကို ရှင်းလင်း တင်ပြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)အတွင်း ရှိ လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့ကို Video Clip ဖြင့် ပြသသည်။
ထို့နောက် တံတားဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖွဲ့(၄)မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (မြို့ပြ) ဦးမြင့်နိုင်ဦးက ရှမ်းပြည် နယ် (မြောက်ပိုင်း)ရှိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တံတား တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ယင်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူး( မြို့ပြ ) ဦးကျော်ဇေယျာဝင်းက Pilot Project ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကျောက်မဲမြို့နယ် ကျွဲကုန်း-နားပြိန်း- နောင်ကွမ်-ပုံဝိုးလမ်း၊ သိန္နီမြို့နယ် နောင်ဆိုင်- မိုင်ပါး-ကောင်းအိုင်လမ်း၊ နောင်ချိုမြို့နယ် နောင်ချို-ရွှေပြည်ညွန့်- ကုန်းစံ-ဂုတ်ထိပ်လမ်း ကတ္တရာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း ပြည်ထောင်စု(ငွေလုံး/ပြင်ထိန်း)၊ ပြည်နယ်(ငွေလုံး/ပြင်ထိန်း) ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သောလမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေ တို့ကို Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)အတွင်း ကျေးလက် လမ်း / တံတားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့ကို Video Clip ဖြင့်ပြသသည်။
ယင်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ် မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်း က ရှမ်းပြည် နယ်အတွင်းရှိ အိမ်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ အဆောက်အဦဦးစီးဌာန အဆောက်အဦအထူးအဖွဲ့(၆) လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး(မြို့ပြ) ဒေါ်အေးခိုင်မွန်က ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)အတွင်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ နှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အဆောက်အဦစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
တင်ပြချက်များအပေါ် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့က ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)အတွင်းရှိ အဆောက်အဦ၊ လမ်း၊ တံတား၊ မြို့ပြအိမ်ရာကဏ္ဍနှင့် ကျေးလက် လမ်း/တံတားများ ဟန်ချက်ညီညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာပါကြောင်း၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများ ပြည့်မီရန်နှင့် အရည် အသွေးကောင်းမွန်ရန်လိုပါကြောင်း၊ လမ်း/ တံတားများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်နှင့် အညီ ကုန်စည် စီးဆင်းမှုများ သွက်လက် မြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်သူများ အတွက် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နေစဉ် အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနှင့် ကြုံတွေ့လာနိုင်သည် ကိုလည်း အထူးဂရုပြုရန်လိုပါကြောင်း၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မပြတ်တောက်စေရန် တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်မှ အမြဲမပြတ် ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ပေးစေ လိုကြောင်း မှာကြားခဲ့ပါသည်။